आर आर क्याम्पसमा अनेरास्ववियूको प्यानल निर्वाचित » खबरहरुको एउटै केन्द्र
आर आर क्याम्पसमा अनेरास्ववियूको प्यानल निर्वाचित
बुधबार, चैत्र १६, २०७३ ०५:४५ मा प्रकाशित !
१६ चैत, कठमाडौँ। रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा अनेरास्ववियूका तपेन्द्रबहादुर शाहीको प्यानल निर्वाचित भएको छ । मङ्गलबार राति भएको मतगणनामा अनेरास्ववियूका शाहीले ६९९ मत ल्याई अध्यक्षमा निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृत हरि पराजुलीले जानकारी गराए । शाहीसहित सचिव, कोषाध्यक्ष र ८ सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचन भएको हो ।
उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाल विद्यार्थी सङ्घका उत्तमवहादुर साउदले ३६७ मत प्राप्त गरेको छ । सचिवमा नारायण शर्मा र कोषाध्यक्षमा संगम देवकोटा तथा अन्य ८ सदस्य निर्वाचित भएको छ । सदस्यहरुमा मदन भण्डारी, दीपक खतिवडा, उज्वल न्यौपाने, जनक शाही, दिनेश बजगाँई, श्याम विक, सुजिता ढकाल र उर्वर सिंह रहेका छन । उपाध्यक्ष, सहसचिव र ५० प्रतिशत समानुपातिक पदाधिकारी निर्वाचनमा आएको मतको आधारमा पछि चयन गरिने निर्वाचन अधिकृत पराजुलीले जानकारी गराए ।
मङ्गलबार भएको निर्वाचनमा एकहजार २७६ विद्यार्थीले मतदान गरेका थिए । दुईपटक स्थगित भएको निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले चैत २ गते निर्वाचन गर्न अन्तरिम आदेश दिए पछि मङ्गलबार निर्वाचन भएको हो । निर्वाचन प्रक्रियामा अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) सहभागी भएको थिएन ।
PREVIOUS POST Previous post: सेवाग्राहीलाई टेलिकमबाट ब्यालेन्स लोन
NEXT POST Next post: गाउँपालिका भित्रका २८ वडामा २८ वटै मतदानस्थल
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बुधबार, चैत्र १६, २०७३ ०५:४५
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बुधबार, चैत्र १६, २०७३ ०५:४५
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बुधबार, चैत्र १६, २०७३ ०५:४५
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बुधबार, चैत्र १६, २०७३ ०५:४५
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बुधबार, चैत्र १६, २०७३ ०५:४५